‘महानगर’ मा मेनुका इन, केकी किन आउट भइन् ? « Mazzako Online
‘महानगर’ मा मेनुका इन, केकी किन आउट भइन् ?
फिल्म ‘महानगर’ बाट नायिका केकी अधिकारी आउट भएकी छिन् । केकीको भूमिकामा अर्की नायिका मेनुका प्रधान इन भएकी छिन् । सोमबार आयोजित प्रेसमिटमा नायक कर्म र नायिका प्रधानले ‘महानगर’ मा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी दिइयो ।
मोहन राईले निर्देशन गर्ने फिल्म ‘महानगर’ मा कर्म र केकी रहने भन्ने खबर प्रेसमिट पहिल्यै अनलाइनमा आइसकेको थियो । केकी आफैंले ‘महानगर’ मा कर्मसँग आफ्नो जोडी रहने बताएकी थिइन् । प्रेसमिटसम्म आउँदा केकी कसरी आउट भइन् त ‘महानगर’ बाट ? समय नमिलेका कारण समझदारीमै ‘महानगर’ बाट बाहिरिएको केकीले बताएकी छिन् भने कार्यकारी निर्माता गोविन्द पराजुली पनि प्रेसमिटमा सोही कुरा बताए । केकी र कार्यकारी निर्माता पराजुलीले भने जस्तै हो त ‘महानगर’ बाट केकी बाहिरिनुको कारण ?
श्रोतका अुनसार असमझदारीका कारण चाहिं केकी ‘महानगर’ बाट बाहिरिएकी हुन् । प्रेसमिटको एक दिन अगाडी फिल्म निर्माण पक्षले केकीलाई ‘सरी’ भनिदिएको हो, त्यो पनि वर्कसपमा अबेला आएका कारण । यद्पी केकी र कार्यकारी निर्माता पराजुलीले यो कारणलाई कोट्याउन चाहेनन् ।